Top dressing | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Top dressing
Honeysuckle: fambolena sy fiahiana
Ny famaritana feno momba ny toetran'ity zavamaniry ity dia ahitana fifanoherana maro. Ao amin'io fianakaviana io dia misy karazan-tsakafo avo sy ambany. Wood sy lianovidny karazana. Miaraka amin'ny voankazo mamy na ny diplaoma. Misy karazana maherin'ny 200 an'io zavamaniry io. Fanosihosena mamaritra: fomban-tsakafo sy varieties Matetika ny honeysuckle no mamaritra ny karazam-borona mitambolimbolina.
Rhubarb, fitsipika ho an'ny fambolena sy ny fijinjana
Rharbarb dia zavamaniry isan-karazany ao amin'ny fianakaviana Buckwheat, miaraka amin'ny rhizome mahery sy ravina be dia be, miorina amin'ny pétolées matevina sy lava. Ny petioles dia mahatratra hatramin'ny 80 santimetatra ary lava 4 cm ny haavony, ka mahatratra hatramin'ny 1 kg ny lanjany. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny fitsipiky ny fampiroboroboana sy fanangonana rharbarb.
Azo atao ve ny mampitombo ny lavenona ao an-trano, ary ny fomba hanaovana izany
Lavender (lat. Lavandula) - solontenan'ny zavamaniry ao amin'ny yasnotkovyh (Lamiaceae na Labiatae). Avy amin'ny teny grika ny anarana. "Lava", izay midika hoe "manasa", dia noho ny zava-nisy tany Gresy fahiny, ny lavanty dia nampidirina tao anaty fandroana. Ny botanista dia miisa 47 karazana an'io zavamaniry io. Lavandeana avy any Mediterane.
Fomba fikarakarana Clematis: ny zava-drehetra momba ny sakafo sy ny voninkazo voninkazo
Clematis, clematis, voaloboka - raha vantany vao tsy miantso an'io voninkazo mahafinaritra io. Azonao atao ny mihaona aminy, angamba, any amin'ny faritra rehetra eran'izao tontolo izao. Amin'izao fotoana izao, ireo mpahay siansa dia namoaka karazana maherin'ny 300 an'io zavamaniry io - avy amin'ny sary fampirantiana sary sokitra mampiavaka ny trano, izay ampiasaina hanamboarana rindrina, gazebos ary zavatra hafa.
Harena an-kibo: zana-trondro maintso
Androany, ireo toeram-pivarotana fako amin'ny fambolena dia feno karazan-tsakafo samihafa. Saingy ny iray amin'ireo tanjona lehibe indrindra amin'ny mpamboly dia ny tombontsoa sy ny maha-voajanaharin'ireo vokatra lehibe. Ny laharana atolotry ny fivarotana dia tsy ilaina foana eo amin'io lafiny io. Misy ny tsara indrindra, ary ny tena manan-danja indrindra tsy misy fandaniana, alternative - hafaraka amin'ny zavamaniry ho an'ny zavamaniry.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Top dressing